20. Oktober 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Dulmigii ay Reer Sitti Dugsadeen ayay Oromo iyo Amxaaro ka Gadoodsan yihiin.
Qulqulaatooyinka iyo Kacdoonka ay Dawladda Ethiopia u maara wayday in ka badan hal sanno iyo wiliba Dheeraad waxay ka curteen cadaalad daro iyo dulmi gaadhay oo ay ka tirsanaayeen dawladda Ethiopia labada qowmiyadood inkastoo dadka qaarkii u haysteen in ay Oromo iyo Amxaaro yihiin kuwaa qudha ee ka faaidday 25 -kii sanno ee ay Qowmyidda Tigreegu hayeen maamulka iyo Majaraha dalka Ethiopia.
Oromo iyo Amxaaro waxay yihiin labada qolo ee ugu tunka weyn dalka Ethiopia taarrikh ahaan iyo Geographi ahaanba marka laga hadlo waxay kalo yihiin ama ka ciyaaraan siyaasada maanta ee dalka Ethiopia kaalinta 2aad iyo 3 aad hadana uma cuntamin saamiga shilis ee ay ku haysteen xukumada Tigreegu hoggaamiyo oo waxay rabaan waxaan aan dadka qaarkii u muuqan oo aan kuraas iyo saami qaybsi iyo kuraas toona midna ahayn.
Inkastoo Oromo iyo Amxaaro ay isku hadaf iyo u jeedo midna ahayn hadana waxay ka midaysan yihiin in lagu soo xadgudbay xaq iyo Xaquuqu distuuri ah oo ay lahayeen ka dib markii si sharci daro ah loogu soo durgey dhul iyo degaano ay taarrikhiyan iyagu leeyihiin sidda daraadeedna waxaa ka go,aan in xukunka laga tuuro taliska Tigreegu hoggaamiyo ee sharcigii dalka ku tuntay.
Sidaa la wada og yahay dalku waa systeem lagu sheego Feedaraal laguna caana maalay qowmiyad walbana waxay si gaar ah u leedahay degaano iyo dhul ay siyaasad ahaan ila xad u madax banaan tahay waana arin distuuri ah oo lama taabtaan ah sidda la sheeego.
Hadaba Oromada waxaa si sharciga baal marsan loogu soo durgey degaano ku hareeraysan jilba laabtaa magaalada Addis Ababa oo loo arko in lagu beeri dad aan Oromo ahayn sharcina u haysan,sidoo kalee waxaa Amxaarka laga fara maroojiyey degaano iyo dhul baxaad weyn oo ay qowmiyadda Tigreegu isku soo fidisay iyadoo ka faaidaysan maamulka dawlada ee ay gacanta birta ku haystaan.
Gun dhiga iyo salka kacdoonku wuxuu ka soo unkamay arrinta labadaa qowmiyadood lagula kacay ee aan soo tibaaxnay wixii kalee ka soo hadhay waa iska damaca iyo siyaasada Geeska Afkrika ee aan waligeed sal dhigeyn.
Hadaba arinta labadda qowmiyadood ka gadoodeen ee dalkii Ethiopia ee Powerka iyo Xooga is biday mudada yar ee koobad ku riday kurbada iyo laxoowga!!
Ilaa Goorma ayay shacabka reer Sitti ee bila codka iyo aqoon yahanka ahi soo dugsadeen dulmiga iyo xaq darada 26 sanno jirsatay?
Tan iyo Markay xukunka la wareegeen Qowmiyadda Tigreegu waxay dalka Ethiopia ku soo rogeen Systeem siyaasadeed oo loogu yeedho Feedaraal oo markiiba ummadda reer Sitti ka xayuubiyey xaquuqdoodi ay u lahaayeen dhulkooga hooyo oo ay ugu horeeyso magaalada Dire-dhba oo ahayd caasimadda gobolka Sitti waxayna si qaldaan ugu wareejiyeen dadka ay maanta is cunayeen ee oromad.
Markii lagu guulaystay asal wareejinti magaalada Dire-dhaba waxaa looga gudbay waji labaad oo ahaa in qaybta galbeed ee gobolka Sitti gaar ahaan caasimadi degmada Mayso iyadna si lamid ah tii Magaalada Dire-dhaab loogu gacan galiyo isla qowmiyadda Oromada oo gacan saar hoose iyo naas-nuugi gooni ah Tigreegu la samaystay.
Labadaa dhacdo ee Oromada loogu eexday markii laga soo fara xashay ka dib waxaa la guda galay halkii iyo gogol xaadhkii kulkii horoba loo soo ruclaynaayey ee ahayd in gobolkan Sitti magac ahaan mooye manfac ahaan hawada laga wada saaro.
Tii ugu xumaydna waxay dhacday markii la yidhi dhamaan galbeedka gobolka waxaa iska leh Canfarta Ethiopia ee loogu saxeexay magaalada Hawash taas oo waliba aan la qeexin halka ay ku joogto ama ku eegtahay xadka loo saxeexay canfarta laakiin marka runta laga waaban waxaa la saxeexay waa dhulkii ay rabta Canfartu oo wada dhan kuna beegan ila duleedka Magaaladi horey Oromada loo siiyey ee Dire-dhaba .
Waxba yuu qoraalku ila taraarixine reer Sitti bay ahayd in ay kacdoonka hormood ka ahaadaan ama la yimaadan siyaasad kale iyo waji kale oo dhulkii laga dhacay ay ku soo ceshanaayaan labaada arimood midna kama muuqato ummadaan dulman ee reer Sitti.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/07/Dhalaankii-Galbeedka-Gobolka-Sitti.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-20 12:15:392016-10-20 13:45:58DIIRADDA XEERNEWS24
Dawladda Ingriiska ayaa mar kale dhigta ugu sheegtay in Maamulka Hargeysa laga... Madaxweyne Erdogan oo Sheegay in Caalamku Hagraday